Farriin Furan oo ku socota Mustafa Omer: Madaxweynaha cusub Ee Deegaanka Soomaalida – Kalfadhi
Farriin Furan oo ku socota Mustafa Omer: Madaxweynaha cusub Ee Deegaanka Soomaalida
Waxaad noqotay Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida. Anigu shakhsi kuu ma aqaani. Balse taasi muhim ma aha. Waayo farriintani ma khusayso arrimo u baahan barasho shakhsi ah. Waan filayaa in ay ku soo gaadhi doonto.
Isbeddelka meel gaar ah ka dhacaa si uu u hanaqaado, u ma baahna qiiro iyo kukici. Deggani ayuu u baahan yahay. Degganidaasna waxa lagu gaadhi karaa tashi.
Dadka deegaanku way qanceen. Dawladnimo waxay tahay waxay u yaqaannaan dhiig u daata kibir. Waa hawl ku sugaysa. Koox ku shaqee. Keligaa haddaad oroddid, oo aad isbeddelkii oo la qofeeyay iska dhigtid, geedkaa muuqda gaadhi maysid. Haddii aad wax kasta cid kale ku hallaysidna, irbad dhuub gelin maysid. Tashiga badso, si aad kalsoonida shacabka u soo celisid. BALSE weligaa kelitaliye iyo mataliye toona ha noqon. Talada ururso, adiguna noqo qofka guddoominaya taladaa. Yaan wax laguu yeedhin, adiguna dadka wax ha u yeedhin.
Si Deegaanku u midoobo, fahanka laga haysto dhulkan sidii loo hagaajin lahaa ka shaqee. Deegaankani ma aha wax la dhaho Ogaadeeniya. Isbeddel laga wada qayb yahay, iyo kalsooni buuxda si aad u dhabaysid, fahanka “dhulka Ogaadeenka” ku beddelo fahanka “dhulka Soomaalida.” Waa in qofka Dhagaxbuur ku nool iyo qofka Gaashaamo ku nooli helaan sabab ku sii haynaysa ka-mid-ahaanshaha Deegaanka.
Beesha aad tahay yaanay ku qeexin. Ma tihid Mustafaha reerkiisa godobta badan laga galay, ee jufo kale cuqdadda u haysa. Waxaad tahay Mustafaha aanada reebi lahaa, ee walaalayn lahaa ummaddan la dhex dhigay nacaybka samayska ah. Si aad taa u gaadhid, waxaad ka shaqaysiisaa cid kasta oo arrintaa rumayn karta.
Wax akhriska badso. Waayo waa furaha fahanka iyo furdaaminta dhibaatooyinka. Tallaabo kasta oo aad qaadaysid, waa in maskaxdaada uu kaaga jiraa buug aad ka akbriday. Baadhista badso. Oo sawir cawaran ha ku dhaqaaqin. Wax hubso, oo hanfade ha noqon. Buugtan baa ka mid ah kuwa aad macmiilan kartid:
Why Nations Fail – Acemoglu & Robinson
Edge of Chaos – Dambisa Moyo
Why Leaders Eat Last – Simon Sinek
My Life – Fidel Castro
Letters Against the War – Tiziano Tersani
Fixing Failed States – Ashraf Ghani
The Politics of Belonging – Nira Yuval-Davis.
Waxa aad u kala duwan in isbeddel siyaasadeed loo ololeeyo, iyo in isbeddel siyaasadeed la hoggaamiyo. Adigu ta hore ayaad ka soo gudubtay, ta danbana waad u soo gudbaysaa. Markaa, taxaddar bay taasi kaaga baahan tahay. Deegaanka oo keli ah marxalad kalagguur ah ma gelayo e, naftaaduna way gelaysaa. Xafiisku la ma mid noqon doono qormooyinkii baraha bulshada iyo xamaasaddii kicinta iyo dhiidhiyadda. Wixii aad ka dhiidhiyaysay ayaad wajahaysaa dhabnimadooda. Miyir bay taasi kaaga baahanaysaa. Miyirkaasna waxa lagu helaa degganaan iyo kafiirsi. Weligeed isbeddel la mahadiyo lagu ma dhisin degdeg. Taariikhda wax badan deris, oo ka baro.
Caddaaladdu waa qodobka seeska u ah hirgal kasta oo lagu sunto ummad. La’aanteeduna waa astaanta dibudhac kasta. Jeel Ogaadeen iyo Jeel Bayaxow (iyo khabbaysyada kale ee qarsoodiga ah) si dhab ah u xidh, oo wixii halkaa gaboodfal ka dhacay la xisaabtan. Masjid ha ka dhisin e, madxaf ka dhig. Innagu ilaahyo ma nihin, oo cidda gef gasha u la ma dhaqanno sida ilaahay. Innaga shaqadeennu waa islaxisaabtan. Islaxisaabtankaas oo dhala caddaalad waarta. Caddaaladdaas oo keenta nabad. Nabaddaas oo curata horumar. Horumarkaas oo horseeda badhaadhe wadareed. Iyada oo aan loo muuqanayn in la wado aargoosi qabiileed, cid kasta oo dadka denbi ka gashay aakhiro ha la sugin. Caddaalad waa in ay helaan kumanaanka dala’siga lagu gumaaday. Xukuumadduna waa in ay garawshiyo ka bixiso wixii magaceeda lagu kharribay. Sidaas baa lagu hanan karaa kalsoonida ummadda ee dalluunta ka shalwatay.
Shuftada Liyuu Boolis dibuhabayn gun-iyo-baar ah bay kaaga baahan tahay. Adiga oo aan degdegsiimo iyo darjiidh muujinayn, ayaad wax weyn ka hagaajin kartaa shuftadaa dirayska xidhan. Waa si kale oo kalsoonida ummadda lagu badhqaban karo
Jabhadaha mucaaradka ah soo dhawayso. Xabbadjoojinta ay ONLF ku dhawaaqday Aug 12, 2018, waa fursad. Midawga ONLF iyo SRDA iyana waa fursad. Ta hore waa kuu fursad, oo haddii aad dheellitirtid xabbadjoojintaa halka dhinac ah, oo dabadeed horkacdid sidii federaalkuna taa kuula qaadan lahaa, waxa jaanis helaysa nabad geyiga ka maqnayd WELIGEED! Ta labaadna waa fursad, oo magaca ay ku midoobeen–SCF (Somali Coalition for Freedom)–waxa ka muuqda isbeddel: kow, magaca waxa ka hadhay Ogaadeen, oo waxa ka muuqdo qaangaadhnimo rabta in Soomaalida Deegaanka oo idil laga qayb qaadsiiyo; labo, ujeedkii magaca hore ka muuqday (xorayn – liberation), iminka wuxuu isu dooriyay “gobonnima-raadin – for freedom.” Waa kuu fursad taasi. Waayo, marka aad bilawdid dedaal Soomaalida Deegaanka oo idil ay qayb ka yihiin, dabadeed aad gobonnimada ummadda ka shaqaysid, ururkaa waxaad ka furatay in uu wax qawado oo kaynta galo. Isu eekaysii dadka kaa soo horjeeda, si aad dooddooda u burisid, iyada oo ay dhab kaa tahay ujeeddadu.
Sidii Deegaanka ay uga qabsoomi lahayd doorasho furfuran, oo dadku qayb ka yihiin go’aaminta masiirkooda, jewi u abuur. Ha niyaysan in aad kursiga isku toshid, ama xisbigaagu waaqii ku sawirnaado. Muwaaddiniinta u abuur saaxad ay siyaasadda khusaysa cod uga yeelan karaan.
Midnimada gudaha doorroonaan sii. Ka dib u gudub deriska Oromada. Aano kasta oo uu taliskii hore dhex dhigay labada qawmiyadood sidii loo siibi lahaa ka shaqee.
TA U MUHIIMSAN, sawraca (identity) ummaddan sug. Soomaalinnimada iyo Itoobbiya in wax lala yeeshaa in anay isdiidayn sidii loo fahmi lahaa ka shaqee. Weligaa ha ku dagmin xunbada “Soomaaliweyn.” Qof xunbo cuskaday haddaad noqotid, adiguna badbaadi maysid, cid wax kaa sugaysayna hadh u jiidi maysid. Dadka Deegaanku waa Soomaali. Waana Itoobbiyaan. Sida qofka Oromka ahi iskumar u yahay Orom Itoobbiyaan ah. Amxaariguna sidoo kale. Maxaa diidaya in ay noqdaan Soomaali Itoobbiyaan ah, oo si run ah uga qaybqaata xaqhelidda muwaaddinka iyo gudashada waajibkiisa? Haddaba, qofka geela ku raacanaya aydu wuxuu kaaga baahan yahay nolol aad u abuurtid. Taas marka uu helo isaga oo aan soohdinta ka tallaabin, laabta wuu u sii dayn doonaa muwaaddinnimada. Xadhig baa ku sii haya reerkiisa magaca guud ah. Xadhiggaa wax u beddela u samee.
Khadku yaanu iga dhammaan. Qalinkuna iga dhadhin. Farriintuna iga dooxmin. Waan ku soo gaadhsiiyay wixii aan u arkayay tallaabooyin mustaqbalka haddada ah u muhim ah. Waa kugu adi! Kursigaaga ha ka dhigin mid adigana kugu culus, dadkana ku luggooyo ah.
Dhamaadka Bishaan oo la dooron doono Golaha deegaanka Magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso